माघे संक्रान्ति किन र कसरी मनाउने ?
जाडो सिजन उत्कर्षमा छ । कतै हिमपात भइरहेको छ, कतै कठ्यागि्रने चिसो छ । ठिक यही मेसोमा हामी माघे संक्रान्ति मनाउँछौं । माघ महिनाको पहिलो दिन यो पर्व मनाइन्छ, जसको अनेक नाम छन् । जस्तो माघे संक्रान्ति, मकर संक्रान्ति, माघी ।
माघे संक्रान्ति किन मनाइन्छ त ?
जान्नुहास् यी आयुर्वेदिक क्याप्सुलले तपाईको आयुमा जीवन निश्चित थप्नेछ
पुरुषबारे १० रोचक तथ्य, जुन उनीहरुले थाहा पाउनुपर्छ
बच्चालाई प्याकेटको दुधः हुनसक्छ ‘डेभलोपमेन्ट डिसअर्डर’को समस्या
मुस्कानले बनाउँछ जीवनलाई मधुर
कस्तो अवस्था भएको व्यक्तिले लसुन पटक्कै खानुहुँदैन
ज्वरो आए स्क्रबटाइफस हुन सक्छ !
घाँटीमा क्यान्सर ! यस्ता लक्षणले त्यही बताउँछ
गर्भावस्थाका तीन चरण : कति बेला हुन्छ खतरा ?
मुटुरोग विशेषज्ञ प्रकाशराज रेग्मी भन्छन्, ‘नुनको कमी भएमा स्वास्थ्यमा गंभिर असर’
पिएसपी रोग कतै तपाईमा पनि देखिएको त छैन ?